Mayelana NATHI - HuaHeng International Packaging Co., Ltd.
Isungulwe ngo-2009, i-HuaHeng International Packaging Co., Ltd.iyinkampani ekhiqiza ukuphrinta nokupakisha. It has ephelele ukukhiqizwa ubuchwepheshe kanye inqubo imishini. Selokhu yasungulwa, ngenxa yomqondo wokuklama oyingqayizivele obheke phambili, iqembu eliqinile locwaningo lobuchwepheshe kanye nentuthuko, kanye nomqondo wensizakalo ocabangelayo, iqoqe amacala amaningi aphumelele futhi yahlinzeka ngezinsizakalo zokupakisha zamabhizinisi awaziwayo angama-200 + asekhaya.
Sisebenza ikakhulu ekwakhiweni kokupakisha okukodwa, ucwaningo nentuthuko, ukukhiqizwa kwamabhokisi asezingeni eliphakeme, amabhokisi ezipho, amabhokisi amakhadibhodi, amabhokisi e-PVC, amabhokisi e-crystal, amalebula nemiyalo. Sitholakala eShenzhen ngokuhamba okulula. Gxila emisha emaphaketheni womkhiqizo Isixazululo senza ukuthengiswa komkhiqizo kuphakame futhi ibhizinisi lincintisane ngokwengeziwe, futhi lizibophezele ekunikezeni amakhasimende ngensizakalo yokumisa eyodwa ye- "R&D, proofing, production, and transport".
I-Huaheng corporation iyaziqhenya ngokuba yiqiniso, ukuqamba izinto ezintsha, ukukhuthazeka nokuqhubeka nokulwela ukuvelela kuwo wonke amakhasimende ethu. Uhlelo lwethu lwesimanje, oluhlanganisiwe lokukhiqiza lusenza sikwazi ukunikela ngamakhasimende ethu imikhiqizo esezingeni eliphakeme ngamanani okuncintisana kakhulu. Ngaphezu kokugcina uhla lwezinto zokusebenza eziguquguqukayo futhi eziguquguqukayo, sigxila kakhulu ohlelweni lwe-R & D ngokusungula ama-Design Centres. Ama-75% emikhiqizo yethu axhashazwa yithimba lethu lokuklama lobuchwepheshe. Njalo ngenyanga kunemikhiqizo emisha enconyelwe inkomba yekhasimende.
Amakhasimende esisebenza kuwo avela eHongKong, eSingapore, eJapane, e-UAE, eRussia, eSweden, e-USA, eCanada, e-Italy, eBelgium, eSpain, e-Austria njll.
I-Huaheng corporation ibilokhu igcizelela okholweni lwebhizinisi "Lokwaziswa kakhulu, ikhwalithi ephezulu, ukuma isikhathi eside", futhi, sigxila ekuthuthukisweni kwekhwalithi eqhubekayo, ukwenziwa ngcono kwezikhungo, ukunwetshwa kobukhona bamazwe omhlaba, nokunikeza amanani amahle wokuthuthukisa imingcele yenzuzo yamakhasimende.
Siyaqiniseka ukuthi imishini eyinkimbinkimbi iqinisekisa ikhwalithi esezingeni eliphakeme, futhi neqembu lochwepheshe lihambisa izinsizakalo ezisezingeni eliphakeme! Siyaqiniseka ukuthi kulo mphakathi oncintisanayo obonakala "ngejubane eliphezulu, ukusebenza kahle okuphezulu kanye nekhwalithi ephezulu", unokushesha okungavamile nekhwalithi engavamile.
I-Shenzhen Huaheng Gaosheng Environmental Protection Technology Co, Ltd. ibilokhu inamathela esimisweni "sekhwalithi, idumela kuqala" futhi ilandela njalo umqondo wamakhasimende kuqala nezinto ezintsha. Sifuna izinzuzo zekhwalithi enhle, intengo ephansi kanye nokulethwa okusheshayo, futhi ngasikhathi sinye sihlangabezana nezidingo zokupakisha nokuphrinta kwamazwe omhlaba, okusenza sithembeke ngokujulile ngamakhasimende amasha namadala! Futhi inika amandla imakethe yebhizinisi yenkampani ukuthi ikhule ngokwengeziwe. Manje amakhasimende ethu asezifundazweni ezingaphezu kuka-30, omasipala kanye nezifunda ezizimele, ngisho naseHong Kong, Macao naseTaiwan. Imikhiqizo yethu ithengiswe emazweni angaphezu kuka-30 nezifunda emhlabeni wonke. Khetha thina, ngokuqinisekile sizokufakazela ukuthi ukukhetha kwakho kulungile.
1. I-Shenzhen Huaheng Gaosheng Environmental Protection Technology Co., Ltd. isebenzisa izinto zokuvikela imvelo ezisezingeni eliphakeme ukwenza amabhokisi ethu epulasitiki okupakisha agqoke ukumelana, anamandla okuqhuma, acwebezele futhi abonakale, futhi acishe angabi nasici. Ukuhlolwa kwekhwalithi yangaphakathi okuningi kulawula ikhwalithi yemikhiqizo evela emthonjeni ukuqinisekisa ukusebenza kahle kokukhiqizwa; ukukhishwa kwanyanga zonke kwemikhiqizo ejwayelekile emabhokisini afanayo kungafinyelela cishe ezigidini ezi-2, futhi imishini iphelele ngokwengeziwe. Ibuye inikeze isitembu esishisayo, isiliva elishisayo, imibala yensimbi, i-matte nendwangu Imiphumela ehlukahlukene yokuphrinta ekhethekile, efana nokusanhlamvu, okusanhlamvu kwezinkuni nokusanhlamvu kwesikhumba, yenza ukwakheka kwepakethe yekhasimende kuvezwe kahle.
2. Inendawo yesitshalo esizimele cishe engamamitha skwele angama-5500, isidlulise isitifiketi senombolo yokuqinisekisa umphakeli, inabasebenzi abaphelele, inamandla yezobuchwepheshe, ucwaningo lwebhokisi lokupakisha nokuthuthuka nokuklama, futhi inomnyango wokwenza amapuleti we-CTP . Inkampani inaka ukukhethwa komkhiqizo futhi isebenzisa izinto ezinobungani bemvelo. Okuqukethwe komkhiqizo kudlulise izitifiketi eziningi zeziqu, futhi ikhwalithi iqinisekisiwe. Idizayini yamahhala nokuhlolwa kwamahhala kunganikezwa ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende amabhokisi okupakisha.
3. Le nkampani yethula okokusebenza kobuchwepheshe obuphezulu nezindlela zokuhlola ubuchwepheshe obuphezulu; isebenzisa uhlelo oluphambili lwe-PLC lokulawula uhlelo, izinqubo ezilula zokulawula isifunda, ukugcinwa okulula. Futhi imishini yokuphrinta yaseJalimane engenisiwe sha ingeniswe ivela phesheya, imishini yokunyathelisa, imishini yokusika, imishini yokunamathisela, imishini eshisayo, ibhokisi elizenzekelayo nelizenzekelayo imishini yokunamathisela othomathikhi, abasiki bephepha abazenzekelayo, imishini yokuphrinta isikrini, imishini yokuphrinta ye-UV nokunye imishini, Izinsiza ezigcwele zokusekela. Ukukhiqizwa kuyashesha, ukulethwa kufika ngesikhathi, futhi imikhiqizo iphelele ngokwengeziwe.
4. Kusuka ekwakhiweni, ekukhiqizweni, ekuphrintweni, kokucutshungulwa, kuya ekulethweni, sisebenzisa insiza eyodwa, uhlelo oluphelele lokuphathwa kwamakhasimende, isiqinisekiso sangemva kokuthengisa, kusuka ekwakhiweni komkhiqizo, ukuphathwa kokukhiqizwa, ukuphathwa kweshejuli, ukuphathwa kwempahla kanye nesevisi yangemva kokuthengisa ukuphathwa. Mayelana nokuhlinzeka ngezinsizakalo kumakhasimende, futhi kunganikeza amakhasimende izixazululo zokupakisha umkhiqizo, kusukela ekufakazeleni ubufakazi kuya ekukhiqizeni kuze kuqedwe isitobhi esisodwa.